Madaxwayne Farmaajo oo Waraaqaha ka Gudoomay Safiirada Hindiya iyo Nigeria (Sawirro) | KALSHAALE
Madaxwayne Farmaajo oo Waraaqaha ka Gudoomay Safiirada Hindiya iyo Nigeria (Sawirro)
Feb 14, 2019 - 3 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjirayaasha cusub ee dalalka India iyo Nigeria ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dowladda Nigeria uga mahadceliyay kaalinta Ciidanka dalkaas ee qaybta ka ah Booliiska AMISOM ay ka qaataan nabadgelyada dalka isaga oo doorasho nadboon oo xor iyo xalaal ah u rajeeyay dalka iyo shacabka Nigeria.
Madaxweynaha ayaa danjirayaasha cusub u ballan qaaday inay wadashaqayn fiican iyo soo dhaweyn diirran kala kulmi doonaan Dowladda Federaalka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Somalia waxay ku dhacday dariiqi soo kabashada ee ka naxoow ALLAHA SWT haku soo hanuunsho. WBT
Ahmed Somali waa kugu raacsanahay rajo ayaa muuqata, howl badana waa hartay, ilaa Amisom baxdo oo anaga amingeena ka adagnahay howsha ma dhawa.
ANAGU SAFIIRO MA DIREE KALIYA KANALOO SOO DIRO BAANU QAABILAA